အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးမည့်အပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးမည့်အပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များကွန်ရက်၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ ၂၀၁၃ ခု၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်
(က) ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များကွန်ရက်သည် ဒီမိုကရေ စီခေတ် ပြောင်း တော် လှန် ရေး ကနဦးကတည်းက အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လျက်ရှိပြီး အမိမြန်မာနိုင်ငံ တိုး တက် ပြောင်းလဲလာမှုကို အစဉ်လိုလားခဲ့ပြီး တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်၊ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် ရခိုင် လူမျိုးဦးတည် သော ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ခြင်းကို ပြတ်ပြတ် သားသား ဆန့်ကျင်သွားခဲ့ပါသည်။
(ခ) ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် အာရ်ကန်မြေ ပထဝီဖြစ်ပေါ်လာကတည်းက ၎င်းဒေသ၏ မူရင်း လူမျိုးဖြစ် ကြောင်း၊ ၎င်းဒေသ၏မြေပထဝီကပင် သက်သေထူလျက် ရှိနေပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုး (မောဂ်လူမျိုး )နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့၏ ရှေးပဝေသဏီကပင် တည်ရှိခဲ့သော ညီအစ်ကို ပင်ရင်းစိတ်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ပျက်စီးခဲ့ ရမှုအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါသည်။ အဖ နရမိတ်လှ၏ စိတ်ကို တမ်းတမိပါသည်။ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ အဆက်ဆက် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ၏ သမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့သော အမျိုး သားရေးနိုးကြား မှု ကို ရခိုင်အစွန်းရောက်လူတစ်စုနှင့် စစ်အာ ဏာ ရှင် ဘာသာရေး အယူသီး မျက်ကန်း တချို့တို့၏ စီမံကိန်းချ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးပြုတ် သုတ်သင် ရေးက မြန်မာ့သမိုင်းသွေးစွန်းခဲ့ရသည်။ ဒီမို ကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေး တိုးတက်ရေးအတွက် သံသယ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းခဲ့ရသည်။
(ဂ) ဤအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရေး၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် အခက်အခဲ မှန်သမျှ ပယ်ချရေးကို ဦးစီးဦးဆောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေမည့် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ အဖွဲ့အစည်း ၊ ခေါင်းဆောင် များ၏ ဆောင်ရွက် ချက်ကို ကြိုဆို ထောက်ခံပြီး လက်ကမ်းတောင်း ဆိုပါသည်။ သို့သော် မြန်မာ့ သမိုင်းအမှန်တွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကို မည်သည့် ပယောဂမရှိစေ ဘဲ ဆောင် ရွက်စေ လိုပါသည်။ ရခိုင်ဘုရင် မင်းမြတ်များ၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှု၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ ပြည်ထောင် စုစိတ်ဓာတ်ရှိမှုက သက်သေထူ လျက် ရှိနေပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာမွတ်စလင်များ၏အခွင့်အရေးကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး တိုင်းရင်း သား တန်း တူ အခွင့်အရေးပေးခဲ့ဖူးကြောင်း ပင်လုံစာချုပ်က သက်သေပြုလျက်ရှိပြီး လွတ်လပ် ရေး၏ အနှစ်သာရ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးတွင် နာဇီဝါဒ၊ ဆာဘ်ဝါဒနှင့် လူမျိုးကြီးဝါဒကျဆုံးခဲ့ပြီး တိုးတက်နေသော ဒီမိုကရေစီ ဝါဒကိုစံနမူနာယူသင့်သည်။ တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးပေးပြီး ဝိုင်းဝန်း၍ အမိမြန်မာ နိုင် ငံတော် တိုးတက်ရေး အတွက် ချီတက်သင့်ပြီ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဌာန လက်ထောက်နိုင် ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell ၏ ၂၀၁၃ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခက်အခဲတို့အား ကူညီဖြေရှင်းသွားမည်ဟု ကမ်းလှမ်းမှုအား ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များ ကွန် ရက်မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုလိုက် ပါသည်။ အဆိုပါ အခက်အခဲသည် ရခိုင်ဒေသရှိ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်း သားပြဿနာ၊ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲပြဿနာ၊ တစ်ခြား တိုင်းရင်းသားဒေသများ အရေးနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခက် အခဲ များဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို အရှိတရား၊ အမှန်တရား အတိုင်းလေ့ လာပြီး ဖြေ ရှင်း သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
This entry was posted on January 25, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကျောက်စာ သက်သေ
မွှေးပျံ သင်းကြိုင် ရနံ့စုံ လှိုင်တဲ့နေ့ →